Nleba ebe / akụrụngwa | Ota Ward Hall Hall
Iji hụ na nchekwa nke ndị ọrụ niile, anyị ga-arụ ọrụ iji mee ka uko ụlọ aprico / nnukwu ụlọ nzukọ, obere ọnụ ụlọ na nnukwu ụlọ nnabata, yana uko ụlọ ngosi ihe na-eguzogide ala ọma jijiji, na ịrụzi ọrụ iji gbasaa ndụ nke ihe owuwu ahụ ..
[Oge mmechi ndokwa: Jenụwarị 2022 na February 1 (atụmatụ)]
Ihe omuma buLeeBiko lelee ihe ndị ọzọ.
Enwere ike ikewa ụlọ ngosi ihe ngosi abụọ ma ọ bụ atọ dabere na ọnụ ọgụgụ nke ihe ngosi ahụ.
Nwere ike ịmepụta ohere nke gị site na ịhazi ụdị ihe ngosi ụgbọ okporo ígwè.Enwere ike iji ya maka ebumnuche dị iche iche dịka ihe ngosi na nkuzi.
Ebe ọ bụ na ọ bụghị usoro ihe mkpuchi, enwere mgbochi dabere na ọdịnaya ejiri.Biko lelee anya mgbe ị na-atụle iji ihe ọzọ karịa ngosi, nkuzi, na nkuzi.Enweghị ike iji ya na oke olu dị ka ịkpọ ụbọ akwara ma ọ bụ karaoke. (Obere na BGM kacha nta.)
Enweghi ike igbanwe nkọwa nke nzukọ, nkuzi, wdg.
Ọnọdụ ebe arụnyere ihe ngosi ihe ngosi a na-agbanwe agbanwe enweghị ike gbanwee n'ụbọchị.
Maka iji gosipụta ihe, a gaghị enwe ike iji nkwupụta ụda dị ka igwe okwu.
Enwekwara ike ijikọ obere ụlọ nzukọ na ime ụlọ ngosi (iji ihe eji eme ihe). (Ọ dị mkpa ịgbaziri otu ụdị ahụ n'otu ụbọchị.)
Ike / akụrụngwa
Ogwe ngosi ngosi (W2.3 x H3.1m)
Ihe osise 200
Ihe ngosi ngosi 100 na ndị ọzọ
* N'ihe banyere iji nkewa, ọnụọgụ ga-agbanwe.
Jiri maka nzukọ
Nanị oche: oche 400
Oche na oche: oche 200
Oge dị mfe
Podium, onye nhazi
A setịpụrụ nke ngwa ọdịyo (gụnyere igwe okwu 3 ikuku) na ndị ọzọ
Banyere ụlọ ichere
Ndị na-eji ụlọ ihe ngosi ahụ nwere ike iji ụlọ nkwadebe n'efu.
* Ọ bụrụ na e kewara ụlọ ngosi ahụ, a ga-ekekọrịta ya na ndị otu ọzọ.
Banyere ime ụlọ nkwadebe ụlọ ngosi ihe ngosi
* Enwere ike iji ya naanị maka nzukọ.
* Ebe ọ bụ na a na-ekenye ya na obere ụlọ nzukọ ahụ, biko mee ndokwa tupu oge eruo.
Igwe akpụrụ mmiri, wdg.
Anaghị akpọ ọkụ
Ozi banyere mbata ụzọ (ogige ọrụ)
* Ebe ọ bụ na a na-ekenye ya ime ụlọ, enweghị ike ịhapụ ya ebe ọ bụla ebugharị ya ma ọ bụ ịpụ ya.
* Mgbe ị na-akwakọba ụlọ ahịa, biko banye n'ọnụ ụzọ ọdụ ụgbọala na-adọba ụgbọala n'akụkụ ụlọ ọrụ nzipu ozi n'azụ Aplico.
Ogo elu: 2.8m
[Ihe ngosi ngosi 1] A na-eji ụlọ niile eme ihe
Mpaghara: ihe dị ka square mita 338
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta: Ihe dịka 138m
[Ihe ngosi ngosi 2] Kewara abụọ
Ngosi ụlọ A
Mpaghara: ihe dị ka square mita 166
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta: Ihe dịka 69m
Ngosi ụlọ B
Mpaghara: ihe dị ka square mita 171
[Ihe ngosi ngosi 3] Jiri na nkewa XNUMX
Ngosi ụlọ 1
Mpaghara: ihe dị ka square mita 83
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta: Ihe dịka 40m
Ngosi ụlọ 2
Ihe dị ka mita 166
Ngosipụta ngosipụta ngosipụta: Ihe dịka 62m
Ngosi ụlọ 3
Ihe dị ka mita 88
[Usoro ọmụmụ] Nkuzi / nkuzi (iji nzukọ)
Mpaghara: square mita 362
Ego ojiji nke ngwa eji eme ihe yana ihe eji eji ngwa oru
Ilitylọ ọrụ ụgwọ
Ndị ọrụ na ngalaba
Getlọ ọrụ ebumnuche
Izu ụka / Satọde, Sọnde, na ezumike
ime ụlọ niile
Naanị ụbọchị niile 28,000 / 28,000
Kewara abụọ (A / B)
Kewara n'ime XNUMX (XNUMX)
Ndị ọrụ na mpụga ngalaba
Naanị ụbọchị niile 33,600 / 33,600
Ego eji eji ngwa ngwa
Lọ ngosi (nzukọ) Ngwa ego / ngwa ojiji ngwa ngwa
Roomlọ ihe ngosi (ihe ngosi) Ngwa ego / ngwa ojiji ngwa ngwa
Nhazi nke ogbo, ụlọ nchere, wdg.